“Waxaa jirta sabab dhab ah ee ka dambeysa in Solari uu iska indho tiro Isco” – Seedorf – Gool FM
“Waxaa jirta sabab dhab ah ee ka dambeysa in Solari uu iska indho tiro Isco” – Seedorf
(Real Madrid) 11 Feb 2019. Xidigii hore kooxda Real Madrid Clarence Seedorf ayaa ka hadlay sababta Francisco Isco uu kaga saaray tababare Santiago Solari shaxdiisa rasmiga ah ee Los BLancos isbuucyadii dhawaa ee lasoo dhaafay.
Clarence Seedorf ayaa xaqiijiyay in Francisco Isco uu heysto tayo aad u fiican, wuxuuna sheegay in uu adeegsan lahaa awoodiisa ciyaareed hadii uu ku jiri lahaa booska macalinka reer Argantina ee Santiago Solari.
Laakiin halyayga reer Holand ee Clarence Seedorf ayaa dhinaca kale tilmaamay inay jirto sabab lagu qanci karo ee ka dambeysa go’aankan.
“Mar walba waa ay adag tahay in la ogaado waxa gudaha ka jira, adigoo ka eegaya banaanka”.
“Isco waa hubaal waa ciyaaryahan aad muhiim u ah, waa mid ka mid ah ciyaartoyda aan garoonka soo galin lahaa, hadii aan fursad u heli lahaa inaan u noqdo tababare”.
“Lakiin waqiyada qaar, waxaa suuragal ah in ciyaartoyda waaweyn ay maraan wakhtiyo aad u adag, sida waajibka ah isla markaana ku jirta danta kooxda, macalinka waa inuu si weyn kaga caawiyaa sida uu dib ugu fiicnaan lahaa ciyaaryahanka maskax ahaan iyo jir ahaanba”.
“Santiago Solari uma waalna heer uu Francisco Isco u fadhiisiyo kursiga keydka sabab la’aan”.